Bhora rinopa: chinja fiat & share. Pool Prize: 50.000 BUSD neBinance - Cazoo
Bhora kupa: chinja fiat & share. Pool Prize: 50.000 BUSD neBinance
musha » musha » Bhora kupa: chinja fiat & share. Pool Prize: 50.000 BUSD neBinance
Tag: Binance, Nhabvu nhabvu, Prize dziva
TL: DR Binance yatanga mutambo mutsva, nhabvu nhabvu. Chero ani anotengesa zvakanyanya anokunda zvakanyanya BUSD.
Kuchengeta mafainari eCopa America neEURO Cup, pamwe nemweya wenhabvu, Binance iri kuvhura makwikwi ekutengesa efiat nemubhadharo wedhizaina re50.000 BUSD.
Iwe unofarira kutora chikamu here? Zvakanaka, chenjera. Chero chipi zvacho chaunoverenga pano hachinei nemazano ezvemari, zvinongova zvechokwadi nhoroondo Binance anoita chinhu ichi. Rangarira kuti kutengesa kune njodzi huru.
Kubva 2021-07-06 09:00 AM (UTC) kusvika 2021-07-12 11:59 PM (UTC)
Vese VIP 0 (vazhinji vedu tese) uye VIP 1 vashandisi vanobudirira kupedza ese anotevera mabasa vanozogovana zvakaenzana mubayiro mudziva we10.000 BUSD:
Tengesa mashoma emadhora mazana maviri mukati BRL, EUR kana RUB
Ratidza kutora chikamu kwako nekutumira yako Binance UID mune module iyi
Vakuru vepamusoro zviuru gumi vanokodzera kutora chinzvimbo panguva yekuendesa maBinance UID avo vanogamuchira 10.000 BUSD imwe neimwe. Kana paine vashoma pane zviuru gumi vanokodzera kutora chikamu, iyo zviuru gumi BUSD mubairo wedziva uchakamurwa zvakaenzana.
Tengesa zvakanyanya, wana mari yakawanda
Iyo 40.000 BUSD mubairo wedziva ichave wega kune vekutanga vatengesi nehuwandu hwekutengesa vhoriyamu (kusanganisira kutengeserana) paEUR, RUB uye BRL maviri ekutengesa panguva yemakwikwi nguva.
Kugoverwa kwemubairo kuchave sekutafura iri pazasi:
Chinzvimbo chemushandisi Dhinda muBUSD
Kubva 1 kusvika 10 $ 18.000 * Yakakamurwa nevhoriyamu
Kubva 11 kusvika 50 $ 400 imwe neimwe
Kubva 51 kusvika 100 $ 120 imwe neimwe
Tafura yemubairo wekutanga Binance Nhabvu Nhabvu
* Mibairo yevakakunda gumi pamusoro ichaganhurwa zvichibva pahuwandu hwevashandisi hwese hwevatengesi zvakaenzana nehuwandu hwese hwevatengesi vegumi vepamusoro panguva yemakwikwi.
Hauna EUR, RUB uye BRL?
Tenga ivo ora!
TENGA BRL PABHINARI
TENGA RUBI PABHINSI
Kana iwe uchida kuverenga iyi pappardella, enda ku yakatsaurwa peji yemakwikwi.
Nyaya yapfuuraNdeipi iri yepamusoro purogiramu yekutenga mari yemadhora?
Nyaya inoteveraIwo gumi akanakisa ekuvanzika mari uye maitiro ekuatenga
India inogona kufamba ichironga Bitcoin sekirasi yeasset
Iwo gumi akanakisa ekuvanzika mari uye maitiro ekuatenga
Bitcoin Pizza Zuva - Binance inopa $ 52.200 inokosha yeBTC Pizza
.... KUTANGA NEKUSIYANA ....
Merkle miti Yese-kutenderera mamaki Binance Binance muAfrica Kutumira kwaBinance Binance Referral ID Binance Smart Cheni bitcoin Blockchain Boca Juniors Binance Referral Code Dapps Defi DEX reShareketi ethereum Ethereum Virtual Mashini (EVM) kusingaperi kurasikirwa Launchpad Metamask Bitcoin kuchera NFT nuncio Asina fungible tokeni pancakeswap kusingaperi kurasikirwa Liquidity dziva Uchapupu hwebasa Rarity zvivabatsire Code Binance Smart Cheni Network Ethereum network centralized masisitimu maitiro ehutongi Mikangano Yema Smart Sorare Makadhi emubairo Sorare kadhi risingawanzo Sorare Super Rare Makadhi Sorare Yakasarudzika Makadhi Stablecoin uniswap Vitalik Buterin chikwama Rairira kurima